Callum Hudson-Odoi Oo Lagu Soo Oogay Dacwad Kufsi Ah Kadib Dhacdadii Xabsiga Lagu Dhigay. - Gool24.Net
Callum Hudson-Odoi Oo Lagu Soo Oogay Dacwad Kufsi Ah Kadib Dhacdadii Xabsiga Lagu Dhigay.
18/05/2020 Mahamoud Batalaale
Faah faahin dheeraad ah ayaa laga helayaa kiiskii waji gabaxa ahaa ee uu la kulmay xidiga kooxda Chelsea iyo xulka qaranka England ee Callum Hudson-Odoi kaas oo ay booliisku xidheen markii ay gabadhi soo dacwaysay.
Sidii aanu xalay idiin soo gudbinay 4:00 habeenimo ee Axadii waxaa booliiska magaalada London soo wacday gabadh ay sheegeen in ay dhibaataysnayd taas oo la shaaciyay in 19 sano jirka kooxda Chelsea ee Callum Hudson-Odoi uu xaalada xun u gaystay.
Markii uu soo baxay xadhiga ay booliisku u gaysteen Callum Hudson-Odoi waxa kaliya ee ay sheegeen waxa uu ahaa in gabadh aan xaalad fiican ku jirini ay booliiska soo wacday isla markaana gaadhiga gargaarka ay dalbatay si cisbitaal loogula carraro.
Laakiin hadda waxaa soo baxday faah faahin intii ka badan waxaana Callum Hudson-Odoi loo haystay in uu kufsaday gabadh kuwa dharka xayasiiya ah oo ay baraha bulshadu ku kulanto iska barteen taas oo xaaladiisa sii adkaynaysa.
Wargayska Daily Mail ayaa shaaciyay in Callum Hudson-Odoi uu gabadhan gurigiisa ku casuumay kadib markii ay baraha bulshada ku kulmeen laakiin arinta ayaa ku dhamaatay dhibaato wayn iyo da’yarkan oo xabsiga loogu taxaabay in uu kufsi gaystay.
War uu qoray wargayska The Sun ayaa lagu sheegay in Callum Hudson-Odoi uu gabadha u diray gaadhigii soo qaadi lahaa markii ay baraha bulshada u kaftameen isla markaana ay isla qaateen in ay wada caweeyaan, waxayna ka baxeen gurigiisa iyaga oo galbeedka London u safray waqti aan la ogolayn in la jabiyo sharciga go’doonka.
Dad goob joogayaal ah ayaa sheegay in goobta ay dhibaatadu ka dhacday ay laba ciyaartoy oo kubbada cagta ahi fiidkii joogeen balse ay arkeen dad isku soo xoomay markii ay booliisku goobta yimaadeen inkasta oo ayna dadku markaas magaca Callum Hudson-Odoi u aqoonsan xidigan.
Laakiin Callum Hudson-Odoi ayaa xabsiga looga sii daayay damaanad kadib markii uu muddo ku jiray waxaana hadda lagu samaynayaa baadhitaan keeni kara in xaaladiisu ay sii xumaato.
Muddada uu Callum Hudson-Odoi banaanka ku joogo damaanada looga soo saaray xabsigii ay booliisku dhigeen ayaan la ogayn inta ay noqon doonto maadaama oo la sheegay in gabadho ay xaalad aan fiicnayn ku jirtay oo ay booliisku ula ordeen cisbitaalka.
Afhayeen u hadlay booliiska magaalada London oo xog ka bixiyay kiiska loo haysto Hudson-Odoi ayaa yidhi: “Booliiska iyo adeega caafiaadka Amblance-ka London waxaa la soo wacay 3:53 daqiiqo ee axadii May 17 waxaana soo dacwaysay gabadh aan xaalad fiican ku jirin”.
Afhayeenka oo faah faahin kiiskan ka bixinaya ayaa yidhi: “Markii uu adeega caafimaadku yimid, gabadh ayaa ku warbixiyay in la kufsaday, waxaana iyada loo qaaday cisbitaalka”.
Afhayeenka booliiska ayaa sababtii Hudson-Odai loo xidhay ku sheegay: “Nin ayaa la xidhay looga shakisan yahay kufsiga. Xabsigii waxaa looga sii daayay damaanad in uu ku soo laabto taariikhda loo qabtay oo ah badhtamaha bisha June”.
Marka ay booliisku dhaaystaan baadhitaanka isla markaana ay xalaada gabadha war sugan ka helaan waxaa la filayaa in Callum Hudson-Odoi ay booliisku maxkamada gayn doonaan iyada oo la sugi doono waxa baadhitaanka ka soo bixi doona.
Mid ka mid ah dadkii dhacdan goobka ka ahaa ayaa yidhi: “Waxaa jiray dhowr ciyaartoy oo dhismaha yimid laakiin saacadihii hore ee Axada waxaa loo yeeray boliis.”
Waxa uu mid kale oo dariska ahaa isna sheegay: “Isku imaad badan ayaa dhacayay laakiin maan ogayn cida mas’uulka ka ah.
Arintan ayaa sumcad dil ku ah 19 sano jirka reer England iyo kooxda Chelsea ee Callum Hudson-Odoi kaas oo loo arkayay mid mustaqbal wayn ku leh xulkiisa iyo kooxdiisa Blues. Kayle Walker ayaa dhawr bilood ka hor waajibaadka xulka qaranka England looga caydhiyay in uu dumar iyo ragg xaflad u qabtay waxayna arinta Callum Hudson-Odoi noqon kartaa boog kale oo xulka Three Lions ku soo baxday.